Zetarmold dia hanomboka ny manao injectcion Lasitra ho an'ny X-tongotra ela
2019-3-19 ny vaovao tsara! Ankehitriny dia vao nandalo ny fahatelo-antoko orinasa fanaraha-maso ho an'ny tetikasa faran'izay mahafinaritra atao hoe X-tongony. Ity tetikasa ity dia natao indrindra mba hiarovana ny mpiasa miasa tongotra nandritra ny dingana. Satria izany plastika X-Leg afaka manampy anao te nipetraka rehefa squat. Vokatra ity dia natao ...
Zetarmold hampandeha tsara mihazakazaka foana Audi fiara tsindrona novolavolaina celling jiro rafitra
By 2019-3-19, Audi fiara celling jiro rafitra efa novolavolaina ho tsindrona in Zetarmold hampandeha tsara ny 5 taona. Mba hanampiana ny fitandremana famokarana mahomby, Zetarmold no ampy fitaovana ho azy ejection milina ho an'ny rafitra. Mandritra izany fotoana izany ny fitandremana mpiasa Zetarmold anjara rehetra avy amin'ny milina mba hahazoana antoka fa clé ...
Injection Molding, Plastic Parts, Tsindrona novolavolaina Plastic fitoeran-javatra, Overmolding tsindrona koronosy, Tsindrona Parts novolavolaina, Tsindrona koronosy Fitaovana,